Kenya oo beenisay dhoofinta dhuxusha Kismaayo - iftineducation.com
Kenya oo beenisay dhoofinta dhuxusha Kismaayo
aadan21 / July 17, 2013
iftineducation.com – Kenya ayaa beenisay eedo la xiriira in askarteedu ku sugan Soomaaliya ayaa ku lug lahaayeen dhoofinta sharci-darada ah ee dhuxusha.
Warbixin la sii ogaaday inta aysan soo bixin waxa ku qoray, ayaa kooxda la socodka cunaqabataynta ee qaramada midoobay waxay ku eedaysay ciidamada Kenya in ay fududeeyeen iibinta dhuxusha laga qaaday dekedda magaalada Kismaayo.
Golaha Ammaanka ee QM ayaa mamnuucay dhoofinta dhuxusha bishii February ee sanadkii hore si loo joojiyo mid ka mid ah ilaha ugu waawayn ee dhaqaalaha ay ka helayeen maleeshiyada Islaamiga ah ee al-Shabaab.
Ciidamada Kenya, oo ay la socdaan kuwa dowladda ku meelgaarka ah iyo maleeshiyada Raas-Kambooni ee uu hogaamiyo Axmed Madoobe ayaa kala wareegay magaalada Kismaayo kooxda al-Shabaab horaantii bishii October, 2012.
Wixii ka dambeeyay waxaa lagu qabtay gudaha magaalada Kismaayo shir muran dhaliyay oo ugu dambayntii lagu caleemo-saaray Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) in uu noqdo madaxayne Jubbaland, balse iyaguna isku magacaabay madaxwaynenimo ilaa shan xubnood oo kale.
Dagaal mar dambe ka dhacay magaalada, ayaa ciidamada Axmed Madoobe ay kaga saareen dhinacyadii ka soo horjeeday.
Dowladda Federaalka Soomaaliya, ayaa warqad qoraal ah oo ay u dirtay Midowga Africa oo si hoose loo helay, waxay Kenya ku eedeysay karti darro iyo in ay ku lug yeelatay dagaal ka dhacay magaalada Kismaayoa.
Barre Hiiraale oo waxba kama jiraan ku tilmaamay in uu Al-shabaab ku biiray
Boqortooyada Sacuudi Carabiya oo Amar Adag Duldhigtay Dad Aan Muslimka Aheyn ee ku Nool Dalkeeda